Ahoana ny fomba hanatanterahana fampielezana mailaka amin'ny Gmail | Martech Zone
Ahoana ny fomba hanatanterahana fampielezana mailaka amin'ny Gmail
Alatsinainy Aprily 20, 2020 Alatsinainy Aprily 20, 2020 Douglas Karr
Indraindray ianao dia tsy mila mpanome tolotra mailaka feno (ESP) miaraka amin'ny lakolosy sy siotsiota rehetra momba ny fitantanana lisitra, mpanangana mailaka, fanaterana entana, ary fitaovana sarotra hafa. Te handray lisitra fotsiny ianao ary handefa azy io. Ary, mazava ho azy, raha toa ka hafatra momba ny varotra izany - omeo ny fahafahan'ny olon-drehetra miala amin'ireo hafatra ho avy. Any no mety ho vahaolana tonga lafatra YAMM.
Mbola misy merge hafa (YAMM)
YAMM dia programa fampiraisana mailaka alefa Chrome izay ahafahan'ny mpampiasa manangana lisitra (amin'ny alàlan'ny import na Google Form), mamolavola mailaka miaraka amina personalization, mandefa izany any amin'ny lisitra, mandrefy ny valiny ary mitantana ny famandrihana azy rehetra amin'ny vahaolana tsotra.
YAMM: Fampifangaroana mailaka maimaim-poana amin'ny alàlan'ny Google Mail & Spreadsheets
Ataovy ao anaty takelaka Google ny fifandraisanao - Apetraho ao amin'ny Google Sheet ny adiresy mailaka an'ny olona tianao handefa mailaka. Azonao atao ny mandray azy ireo amin'ny Contact Google anao na manafatra azy ireo avy amin'ny CRM toy ny Salesforce, HubSpot, ary Copper.
Mamorona ny hafatrao amin'ny Gmail - Misafidiana modely iray avy ao amin'ny galeran'ny modely misy anay, soraty ao anaty Gmail ny atiny mailaka, ampio ny personalization ho anao, ary tahirizo ho volavola.
Alefaso amin'ny YAMM ny fampielezan-kevitrao - Miverena any amin'ny Google Sheets handefa sy hanarahana ny fampielezan-kevitra amin'ny mailakao amin'ny Another Another Merge. Ho hitanao ny hoe iza no nipaoka, nisoratra anarana, nanokatra, ni-tsindry ary namaly ny hafatrao mba hahafantaranao izay handefa azy ireo manaraka.
Mba hanombohana dia apetraho amin'ny Google Chrome fotsiny ny YAMM. Manana tsara i YAMM tahirin-kevitra ihany koa.
Ampidiro ao amin'ny Chrome ny YAMM
Tags: kitikamailaka fampielezan-kevitraGmailfanaraha-maso gmailgoogle formgoogle g suiteahoana noyamm
Outplay: Sehatra famokarana varotra ivelany feno Omni-Channel
COVID-19: Jery vaovao amin'ny paikadin'ny programa momba ny tsy fivadihana ho an'ny orinasa